Abuubakar.org – Faafinta Ishaacaatka bulshadda muslimka ah dhexdeeda iyo Khatarta ay leedahay”
Faafinta Ishaacaatka bulshadda muslimka ah dhexdeeda iyo Khatarta ay leedahay”
Abuubakar.org October 28, 2011
Ciidu waa Axada soo socota:
Sidii horay aan u faafinay inuu nagu soo aadan ayahay Sh. Maxamed Idris, ilaahay fadligiis Sheikha ayaa soo gaaray Minneapolis kana jeediyey khudbadii Jimcaha maanta Masjid Abuubakar. Khudabada maanta ayaa kusaabsanayd “Faafinta Ishaacaatka bulshadda muslimka ah dhexdeeda iyo Khatarta ay leedahay” hoos ka dhagayso Khudbadii maanta iyadoo Af-Carabi iyo Af-Soomaali ah.
Maalmaha Soo socda Barnaamijta Sh. Maxamed ka bixin doono Masjid Abuubakar Fadlan hoos ka daalaco kana soo qayb gal.
Muxaadarada Jimcaha Bacdal Maqrib “ Tobanka Dul-Hijja (Arafo) iyo Fadligooda”
Muxaaddarada Axadda bacdal Casar Dumarka kaliya “21 Darsi oo laga qaadanayo Suuratu An-Nuur”
Maalmaha Jimcaha – Isniinta Salaada Subax kadib “ wacdi kooban ayaa Sheikhu bixin doonaa insha allaah”
Fadlan Fasaxaaga khayr ku qaado, nagala qayb qaado camirida Masaajidka illaahay.
Date Friday, October 28, 2011
Abuubakar As-Saddique Islamic Center 2824 13th Avenue South
Faah faahin intaa dheer fadlan soo wac 612-871-8600 Ex:0 ama aaic@abuubakar.org Tweet
TAGS » featured, idris, khutbo